Ndinogadzira sei zvinyorwa kune webhusaiti yangu sewe generator backlink generator?
Mazuva ano, munhu wese anoziva kukosha kwehutano hwehutano hwehutano hwewebsite yepawebsite inosimudzira kufambira mberi. Uye hapana chikonzero chokutaura kuti unhu hunogara huchikanda huwandu huno pano - kukanganwa nguva dzakare apo apo guru re backlink rinoshandiswa kuva guru guru, asi pane chaiyo chaiyo. Uye pasi ini ndiri kuenda kukuudza nezve nzira dzakanakisisa zvitatu dzekuwana hukama hwehutano, kana ini ndinogona kutaura - sekuita seanotora backlink generator uye pasina kukanganisa. Saka, regai tione kuti unogona sei kuwana zvakakosha shure, kana tinogona kutaura kuti DIY inotsvaga backlink generator, pamwe nekuedza kushandiswa kwekushandura, pamwe nekupa mushanyi mabhuku mutsva kuti uwane hukama hwehupenyu nepamusoro PR (peji yepamusoro) uye DA (chiremera chechirongwa ) mukudzoka.
Iyi nzira yekare yekubatana kwemasanganisi (zvisinei, inosangana mavhiri) inowanzoshandiswa pakuvaka yakawanda yemashure. Link kushandiswa inowanzonziwo nokuda kwekuda-kuva yakawandisa automatic backlink generator. Nzira iyi inowanzobvumira kuwana huwandu hwemasungo huchinjana, somuenzaniso pakati pewebsite yako uye mamwe mawebsite (i. e. , mapepa emabhulogi anotungamirirwa neavo vandinonamata navo, kana kuti zvimwe mamwe mawebsite anoda uye akagadzirira kupinda muchikwata ichi chinobatsira).
Zvechokwadi, kuenda kunechishandisirano chekubatanidza kune zvimwe zvakawanda zvinobatsira, kunze kwengozi yaro inogona kuwanikwa kuti iwane chirango chakatarwa nemichina yekutsvaga - kumativi maviri echitengo. Ndinoreva kuti pane chero mamiriro ezvinhu iwe unofanirwa kuva noushingi zvakakwana kuti uedze kamwechete - nokuti iyi ndiyo nzira yakarurama iyo vanhu vari kuwirirana. Saka, kuisa chinangwa chepamusoro pane zvipikirwa zvako zvinopikirwa, kwete mararamiro anorasikirwa anowirirana nekutsinhanisa kushandiswa, iwe unorayirwawo kuti uchengetedze. Ndinoreva kuti kuva nebhuku rakasiyana kana webhusaiti kuti uedze urongwa urwu rwekutanga huchava chigadziro chakanyatsogadziriswa chekunzwisisa mitemo inobatsira yemutambo nguva isati yasvika, pasina kuwana chikamu chekutsvaga pakarepo.
Mutevedzeri Blog Posts
Kushandirana kwevhangeri kungaita sechinhu chakaipisisa kunyange kuedza kamwechete, chakanaka? Zvadaro iwe unogonawo kufunga nezveimwe nzira yehutano unobatanidza kuvaka - kunyora vatenzi mabhuku. Kana waita zvakanaka, muenzi wokugadzira mabhuku anogonawo kuva sarudzo yakakodzera iyo inogona kukubvumira kuita sejenjini rekutsvaga backlink iwe pachako. Inzwa simba rechokwadi revashanyi - usaisa nguva yako pakunyorera zvakakosha zvakanakisisa zvehutano. Kana uchangobva kuwana chibvumirano chekutanga kubudiswa pabhuku rinozivikanwa kana pane imwe nzvimbo yechitatu yepaIndaneti ine peji yakakwana uye chiremera chemasimba, inguva yekuisa nguva yako nesimba nekunyora.
Kana imwe nyaya yako kana kuti mushanyi wekugadzirira yakagadzirira, zvose zvaunoda ndezvipi kuti uzviise kune imwe yekugamuchira zvakasikwa zvakasikwa mushure mokudzokera. Nenzira, kugoneswa nemajini makuru ekutsvaga (saGoogle pachako), iyi nzira inogona kunge yakachengeteka. Saka, iwe unofanidza kuedza kuwana backlinks yehutano nevakashambadzi vetsamba chero zvakadaro. Mushure mezvose, kushandiswa kwakanyanya kushandiswa kune imwe nzira inotarirwa zvakananga kune webhusaiti, iyi nzira inonyatsozivikanwa zvose nevebibi, uye vadzidzisi Source .